State Duma tụlere itinye aka na mgbasa nke ala ugbo - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
A ga-eme ụbọchị ubi nke raara onwe ya nye maka ịkọ ugbo na saịtị nke August-Muslyum ụlọ ọrụ ugbo.
Ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Idaho na-arụ ọrụ rọbọt na-eji ahịhịa eme ihe n'ubi
Tiori na omume: AGROVOLGA 2022 ga-ejikọta ihe niile
Robots ubi sitere na Denmark nwere ọtụtụ ọrụ yana ọtụtụ ọrụ
Nleba anya nke ubi nduku na-aga n'ihu na mpaghara Kaliningrad
Dagestan na-arụsi ọrụ ike na mbubata mkpụrụ osisi biiti na karọt
"MinvodyAGRO-2022": ihe niile maka ndị ọrụ ugbo nke North Caucasus Federal District
Perm ewepụtala ngwugwu ngwanrọ maka ijikwa sistemu ogbugba mmiri n'ubi
Ịmepụta ụlọ akụ nke ụdị nduku dị mma na-aga n'ihu na Yamal
Mkpado ndị na -ewu ewu
Dijitalụ ga-enye ohere nleba anya n'ime ụlọ ọrụ agribusiness
Ịgha mkpụrụ site na iji agro-drone
Otu GRIMME: INTERNORM na RICON, ndị na-eweta akụrụngwa abụọ siri ike, na-aga n'ihu na-eto eto
GRIMME - ọkachamara na teknụzụ akwụkwọ nri
GRIMME: ihe na-ewe ihe ubi ahọpụta 200 ọhụrụ
GRIMME: Nkwụghachi azụBunker na EVO 280
GRIMME: ọhụrụ REXOR
Ihe ngosi nke Sayensi na Teknụzụ maka Ọrụ Nduku
na akwukwo nri fatịlaịza
Teknụzụ Nagro: ụzọ dị irè maka inweta na ichekwa ihe ọkụkụ
Usoro iji melite arụmọrụ nke mmepụta ihe ọkụkụ na ọnọdụ nsogbu
Neutralization nke ala salinity
Nchekwa nduku: dị irè ma dị mma
Ojiji nke biostimulants na nhazi nduku tubers tupu akuku. Anyị na-arụ ọrụ maka owuwe ihe ubi!
OMYA MAGPRILL - igodo maka mkpụrụ nduku bara ụba na nke dị elu
Teknụzụ na-eto nduku na-aga nke ọma
NORIKA. Anyị na-etolite ụdị ebu
Ịkwalite arụmọrụ nke teknụzụ maka mmepụta nke obere tubers nduku
Agronomy nke ruru eru bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi nwetaghachi ụgwọ
Ịre ahịa nduku na imepụta uru na Etiopia
Onye na-arụ ọrụ ịhụnanya na-eto eto na-arụ ọrụ na mpaghara Astrakhan
McCain: Fries French kacha mma chọrọ akụrụngwa kacha mma. Anyị na-eme atụmatụ itolite ya na Russia
"Onyinye nke Malinovka" n'etiti ụlọ ọrụ kachasị mma nke ụlọ ọrụ ugbo-arụ ọrụ nke Krasnoyarsk Territory natara "ntị ọla edo"
"Dmitrovsky poteto": oge ​​2021
Tummers: site na obere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na onye ndu ụwa
Njikwa ozi ọma
Isi News Ala
Steeti Duma tụlere itinye aka na mgbasa nke ala ugbo
в Ala, News, Ozi Russia, Omume / Etu
Kekọrịta na TelegramKekọrịta na LinkedInKekọrịta na VKzipu site na ozi-e
A tụlere mgbanwe n'iwu gbasara itinye aka n'ala ọrụ ugbo na nzukọ ọrụ nke osote onye isi oche nke steeti Duma Alexei Gordeev na osote onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo Svetlana Khodneva, kwuru. pịa ọrụ nke Ministry of Agriculture of Russia.
Ministri ọrụ ugbo na-ahụ maka okwu a nke ọma. Karịsịa, edobelarị iwu gọọmentị etiti na steeti Duma, nke na-enye ohere ịnye ụlọ ọrụ ndị ọrụ ugbo (ugbo) ụlọ maka ịgbazite n'ebughị ụzọ ruo afọ 5. Nke a ga-edozi nsogbu metụtara enweghị ike maka obere ụlọ ọrụ na-asọmpi na nnukwu ụlọ ọrụ na-ere ahịa ala.
Ị nwekwara ike ịmasị
A na-arụ ọrụ iji kwalite usoro maka ikewapụ ala ubi n'aka ndị nwere ikike na-adịghị mma.
"Iwu iwu, nke Ministry of Agriculture mepụtara, na-atụ aro ka e belata okwu maka iwepụ ala ugbo nke a na-ejighị mee ihe maka nzube ya. Ma ọ dị oke mkpa imesi ike na usoro a ga-aga n'usoro ikpe," Alexey Gordeev kwuru.
Usoro iwu a na-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume iburu n'uche oge nke anaghị eji saịtị ma ọ bụ iji ha mee ihe megidere iwu Russia site na mgbe ndị ọrụ nlekọta gosipụtara eziokwu ahụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-amalite ịgbakọ oge ahụ naanị mgbe emechara mmebi iwu, nke na-egbu oge nke ukwuu na usoro nkwụsị. Mgbanwe ndị ahụ ga-eme ka o kwe omume ịlaghachi ngwa ngwa na mgbasa ozi ugbo ma gbochie mmebi ha ọzọ.
Tụkwasị na nke ahụ, n'aha onye isi oche nke Russian Federation, Ministri ahụ mepụtara akwụkwọ iwu gọọmenti etiti nke na-eme ka usoro ahụ dị mfe maka ịnakwere mbak ala dị ka nke a na-ejighị n'aka na ịnyefe ha n'aka nke obodo.
Nakwa na nzukọ ahụ, ndị otu ahụ kwurịtara ngwa ngwa nke mmejuputa iwu na 2022 nke mmemme nke State Programme maka itinye aka nke ọma nke ala ugbo na mgbasa ozi na mmepe nke mgbagwoju anya nke Russian Federation.
isi: Ministry nke oru ugbo nke Russia
Tags: nloghachi nke ala dara ada na ntụgharị ihe ọkụkụDuma steetiiwu alaala oru ubireclamOzi nke Ọrụ Ugbo nke Russian FederationOnyeisi
Akụkọ ndị emetụtara
si Olga Maksaeva
Na saịtị nke ụlọ ọrụ ugbo August-Muslyum, site na nkwado nke Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Tatarstan na nchịkwa nke mpaghara Muslyumovsky, ...
si Maria Polyakova
Aigen nwere olile anya imecha robọtụ ịhịa aka n'ahụ maka ịhịa aka n'ahụ n'ọgwụgwụ oge ọkọchị, emechara emezigharị maka ojiji na...
Site na Julaị 6 ruo 8, ndị ọrụ ugbo sitere na Russia niile ga-ezukọ na ihe ngosi AGROVOLGA iji mata mmezu kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ agro-industrial,...
Sistemụ robotic nke Robotti kwụụrụ onwe sitere na ụlọ ọrụ Danish AgroIntelli na-enyere ndị ọrụ ugbo n'ofe Europe na ndị ọzọ aka imeju oke ụkọ nke…
Ndị ọkachamara nke ngalaba nchekwa nke ngalaba nke Federal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr" na mpaghara Kaliningrad na-aga n'ihu nyocha nke ubi a na-eme atụmatụ maka ịkụ poteto, ndị ọrụ mgbasa ozi nke Rosselkhoztsentr na-akọ....
Ụlọ ọrụ Dagestan maka Ọzụzụ Advanced nke Agroindustrial Personnel amalitela ọzụzụ n'okpuru mmemme "Innovative Technology in Plant Growing", ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture of Russia na-akọ. E wezụga...
Na Septemba 14-16, 2022, a ga-eme ihe ngosi 1st International Agro-Industrial Exhibition "MinvodyAGRO". Ihe omume a ga-eme na Mineralnye Vody, na MinvodyEXPO IEC. "MinvodyAGRO" -...
Anyị na-atụkwasị obi site Pros
Rostselmash ga-eweta ihe ubi kachasị ọhụrụ nke ezinụlọ F na AGROSALON-2020
Ọnụ ego yabasị na-arị elu na Russia
"Ọgọst" Mpaghara Astrakhan Belarus Bryansk mpaghara Nkwado gọọmentị Kazakhstan Otu nduku Ógbè Krasnoyarsk Nri mmanu Ozi nke Ọrụ Ugbo nke Russian Federation Ministry of Agriculture Ozi nke Ọrụ Ugbo nke Russian Federation Mpaghara Moscow Nizhny Novgorod mpaghara Novosibirsk mpaghara Republic nke Tatarstan Republic nke Chuvashia Rosselkhoznadzor Rosselkhoztsentr Obodo Stavropol Uzbekistan Ukraine Mbupu nduku nduku na-eto magazine "Nduku System" mbubata nduku kabeeji poteto nduku na akwukwo nri coronavirus reclam carrots borsch set inine ogbugba mmiri n'ubi nduku na-akụ poteto French fires emepụtara ozuzu nduku na nkpuru ozuzu nduku mkpụrụ nduku mmepụta mkpụrụ nduku Ngwa GRIMME ihe ubi nduku nchekwa nduku mkpụrụ osisi nduku